QIIMAHA BASKA EE RUSSIA AYAA SII WADI DOONA INUU YAREEYO - MAQAALLO
Qiimaha baska ee Russia ayaa sii wadi doona inuu yareeyo
Suuqa Ruushku waxay sii wadaan inay noqdaan basasha raqiis ah. Sababtoo ah baahida daciifka ah, beeralayda ayaa si firfircoon u cusbooneysiiyay qiimaha alaabtooda tan iyo bilawgii toddobaadkan. Hoosudhaca qiimaha ayaa la arkay xitaa todobaadkii hore, haddana hadda waxa ay gaartay ugu badnaan, sida uu sheegay khabiirada EastFruit.
Hoosudhaca dhaqdhaqaaqa macaamilka ayaa walwal ah ma aha oo kaliya basasha tayo hooseeya, laakiin sidoo kale alaab tayo sare leh. Xaaladda sii kordhaysa ee iibka basasha suuqa Suuqa Ruushka ayaa laga soo xigtey asalka kororka soo dejinta. Tirade badan ee khudradda waxay ka yimaadaan Uzbekistan iyo Kazakhstan.
Qiimaha basbeelka laga soo dhoofiyo maanta waa qiyaas ahaan 16-18 roon / kg ($ 0.25-0.28 / kg). Soo-saarayaasha basasha sidoo kale kuma faraxsanyihiin dhaqdhaqaaqa iibka yar ee Ruushka. Khubarada ayaa ra'yi ka ah in hoos u dhigista qiimaha basasha ay kiciyaan qiyaaso badan oo ah alaabta tayadoodu hooseeyso si ay u galaan suuqa.
Iyada oo kululeynta ee basasha sida iibinta ayaa noqday mid aad u badan. Hadda beeraleydu waxay ka soo gooyaan basasha dukaamada khudradda, iyagoo hela waxyaabo badan oo aan rasmi ahayn. Waxay diyaar u yihiin inay iibiyaan khudradda noocan oo kale ah xitaa 12-16 roon / kg ($ 0.19-0.25 / kg). Tani waxay keenaysaa xaqiiqda ah in qiimaha tufaaxa tayada sare ay horey u dhacday 17-26 roon / kg ($ 0.27-0.41 / kg), taas oo 6% ka yar tahay dhammaadka todobaadkii hore.
Waxaan kugula talinaynaa inaad akhrido
Hase yeeshee, maanta qiimaha basasha ee Ruushka waa laba jeer oo ka sarreeya isla taariikhda Abriil 2018. Ka qaybgalayaasha suuqyada ayaa sheegaya in haddii qiimaha uu kordho, waxay noqon doontaa oo kaliya basasha tayo sarre leh, taas oo ay hadda ku xaddidan tahay dalka.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Maqaallo 2020